August 7, 2020 – Gasy Egypte
August 7, 2020 September 20, 2020 admin
Naharitra 4 andro ny fankalazana. Nanomboka ny alakamisy ariva ny 30 jolay ka Nifarana alatsinainy ariva ny 3 Août, Maro amin’isika malagasy no tsy tena mahafantatra izany Eid Al Adha izany fa faly fotsiny hoe andro tsy fiasana sady andraisan-karama Ao anatin’ity lahatsoratra ity no hitondrana fahalalana kely momba izany. Andao ary eh ! Inona Eid Al adha izany ? Eid Al adha na “festival of sacrifice” dia an’isany fankalazana lehibe indrindra eo amin’ny finoana silamo. Aty Egypta sy any amin’ireo firenena, anisan’izany Madagascar, dia natao andro tsy fiasana io…
Les Chroniques de Mihaja, Place au Caire, VaovaoLeave a comment